Ogaden News Agency (ONA) – Dowladda Masar oo Soomaaliya u Balanqaaday Taageero Militari.
Dowladda Masar oo Soomaaliya u Balanqaaday Taageero Militari.
Posted by Wariye Qaran	/ July 11, 2017
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed Gen: Maxammed Axmed Jimcaale(Cirfiid) oo booqasho ku jooga dalka Masar ayaa kulan la qaatay taliyaha guud ee ciidanka Masar Gen: Maxammed Xujaasi, waxayna si weyn isu-la gorfeeyeeen dagaalka argagixisada iyo sida dowladda Masar uga caawin karto Soomaaliya xasilinta amniga guud ee dalka.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Gen: Cirfiid ayaa ku dheeraaday dagaalka ciidanka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay kula jiraan al-shabaab iyo guulaha ilaa iyo haatan laga gaadhay,wuxuuna ciidanka Masar ka codsaday in ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka taageeraan xasilinta waddanka iyo dagaalka al-shabaab.
Taliyaha ciidanka Masar ayaa sheegay in Masar ay ku jirto dagaal lamid ah kan Soomaaliya ay ku jirto, kaasi oo ah cirib-tirka argagixisada,balse wuxuu xusay in militariga Masar ay ku dhowyihiin in ay gebi ahaanba soo af-jaraan kooxaha argagixisada ah ee ku dhuumaalaysanaya Jasiiradda Sinai ee dalkaasi.
Dhinaca kale taliyaha ciidanka Masar ayaa ballanqaaday in ay Soomaaliya ka caawinayaan la dagaallanka argagixisada iyo sidoo kale taba-barka ciidanka, wuxuuna tilmaamay in iskaashiga ciidan ee labada dal uu muhiim u yahay amniga gobolka iyo kan qaaradda Afrika. Dowladda Masar oo khilaaf dhanka biyaha kala dhexeeyo Ethiopia ayaa doonaysa in ay galaan-gel ku yeelato gobolka Bariga Afrika, gaar ahaanna Soomaaliya, dhinacyada militeriga iyo siyaasadda, si ay xulufo ugu yeelato geeska Afrika.